Izindatshana zikaRichard Hollis Martech Zone |
Imibhalo nge URichard Hollis
Ngokwesikhundla sakhe samanje, uRichard Hollis ungumnikazi, umsunguli kanye ne-CEO ye Holonis Inc., ezinze eSan Diego, California. Bebambisene nendodana yakhe, uHayden Hollis, laba bobabili baklama umbono wokwakha inkundla yebhizinisi lezokuxhumana elididiyelwe ngokugcwele, ebhekiswe ekuqondeni nasezimisweni zamaholoni, umqondo wokuthi isisombululo ngasikhathi sinye siyingxenye futhi sisonke. IHolonis inika amandla amabhizinisi abo bonke osayizi ngobuchwepheshe obudidiyelwe obumnandi, obulula, futhi obubizayo obusetshenziswayo, inhloso engqondweni ukukhahlela nokuqalisa kabusha umnotho wabo bonke abasebenzisi ukuze babe phambili ekuguqulweni kwedijithali okuvela ngokushesha okukhulu.
ULwesine, May 21, 2015 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 URichard Hollis
Ikhulu lama-21 leminyaka libone ukuvela kobuchwepheshe obuningi kangaka obusenza sikwazi ukumaketha ngempumelelo amabhizinisi ngendlela edidiyelwe futhi enomthelela uma kuqhathaniswa nesikhathi esedlule. Kusuka kumabhulogi, ezitolo ze-ecommerce, ezimakethe ezikwi-inthanethi kuya eziteshini zemithombo yezokuxhumana, iwebhu isiphenduke inkundla yomphakathi yolwazi kumakhasimende okusesha nokuwadla. Ngokokuqala ngqa, i-Intanethi idale amathuba amasha amabhizinisi njengoba amathuluzi edijithali asizile ukuhlehlisa nokuzenzekelayo